Waxaa Goor Dhaw Ladhaariyey Golaha Wasiirada Hirshabeelle(Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabeelle ayaa la dhaariyay, wax yar kaddib markii ay ansixiyeen Xildhibaanada Baarlamaanka, iyadoo Madaxda Hirshabeelle ay soo dhoweeyeen ansixinta.
Wasiirada Hirshabeelle ayaa lagu hor-dhaariyay Madaxweynaha, Madaxweyne kuxigeenka, Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada.
Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa soo dhoweeyay ansixinta Golaha wasiirada, waxaana uu uga mahad celiyay Baarlamaanka qaabkii ansixinta oo ka dhigeysa in Golaha Wasiirada wixii hadda kadib ay u howl galana waajibaadkooda.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi waare oo khudbad ka jeediyay munaasabaddii lagu ansixinayay wasiirada ayaa ka hadlay arrimaha amniga iyo howlaha hor-yaala Xukuumadda.
Waxaa uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, sidoo kale uu socdo mashruuc lagu dhisayo Garoonka diyaaradaha Jowhar.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in maamulkiisa wax ka qaban doono ammaanka, isla markaana la isku furi doono waddooyinka isku xira deegaanada Hirshabeelle, waxaa uu soo dhoweeyay weerarada cirka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab, taasoo uu xusay inay si weyn u wiiqday awoodooda.